Zimbabwe's ousted vice president says Robert Mugabe should resign immediately - ITV News
21 November 2017 at 11:04am
Emmerson Mnangagwa and Robert Mugabe at a gathering in early November. Credit: PA
Zimbabwean president Robert Mugabe should acknowledge the nation's "insatiable desire" for a leadership change and resign immediately, the recently fired vice president said as impeachment proceedings begin.
The ruling ZANU-PF party has begun impeachment proceedings against Mr Mugabe after its Central Committee voted to oust the president as party leader and select Mr Mnangagwa as his replacement, a move that eventually could allow the former vice president to become head of state.
Impeachment proceedings against Robert Mugabe get underway in Zimbabwe's parliament. Credit: John Ray/ITV News
ITV News Africa Correspondent John Ray is at parliament and said the atmosphere is "electric" inside the building.
One ZANU-PF MP said: "We are heroes."
Inside Zimbabwe's parliament as impeachment proceedings begin. Credit: John Ray/ITV News
Many believed Grace Mugabe would succeed her husband as president. Credit: PA
For days huge crowds have surged through the capital Harare to demand that Mr Mugabe quit.
Zimbabweans gather to pray for the country in a park opposite the parliament building in Harare. Credit: PA
Zanu PF has said Mr Mugabe could be voted out as early as Wednesday but some analysts believe the impeachment process could take weeks and would, if conducted properly, allow Mr Mugabe to make a case in his defence.